Abatshalizimali abathi balahlekelwe ngamakhulu ezinkulungwane zamaphawundi ngokukhwabanisa okusolwa nge-cryptocurrency abananhlanhla yokuncenga amaphoyisa ukuthi empeleni kukhona ubugebengu obenziwe.
Ngokusho kophenyo olwenziwe yi Iphephandaba iMetro eshicilelwe ngoLwesibili, abatshalizimali abaningi bathi batshale imali kuphrojekthi ye-cryptocurrency ebizwa ngeLyfcoin ngezethembiso zokubuyiselwa okukhulu, kepha abayitholanga imali yabo.
Ngokusho kwezinsolo, abatshalizimali batshelwe ukuthi benze izibambiso eziqinile izinyanga ezinhlanu ukuthola imbuyiselo engu-100%, kepha njengoba isikhathi siphela batshelwa ukuthi kuzodingeka bafinyelele ezinyangeni eziyi-12 noma ezingama-24. I-Staking yindlela yokuxhasa amanye amanethiwekhi we-blockchain nokuthola imivuzo ngokwenza imali isikhashana.
Yize kungasolwa yiphephandaba ukuthi iLyfcoin uqobo luhlelo lokukhwabanisa - yize abatshalizimali beyifanise nedola lezigidigidi I-OneCoin scam - abatshalizimali abakhulume neMetro.co.uk bathe bakhuthazekile ukuthi batshale imali ngabantu abathi bayathinteka kulo msebenzi.
Leli qembu lithi lilahlekelwe cishe ngama- £ 100,000 ($ 130,000) ekutshalweni kwemali futhi lilinganisela ukuthi kufinyelela ku- £ 2.5 million ($ 3 million) obekungase kulahleke e-UK isiyonke.
Basola ukuthi umuntu ogama lakhe linguSakhi Rezaie waqasha abantu kulolu hlelo okuthiwa luphiramidi, ekhombisa izethulo, ebamba izingqungquthela zeZoom futhi emema nabangaba ngabatshalizimali ehhovisi lakhe laseBirmingham. Izinkokhelo zokufaka ithokheni zathunyelwa kuma-akhawunti asebhange kaRezaie hhayi kwi-akhawunti esemthethweni yaseLyfcoin, kusho bona.
URezaie uthi ubengumtshali-zimali kuphela kuphrojekthi ye-crypto, kusho iMetro. Kodwa-ke, leli phephandaba likhonjiswe izingxoxo zeWhatsApp kanye nobufakazi bokukhokhelwa kwe-akhawunti yakhe egameni leMK Brothers Ltd ngumtshali-zimali olahlekelwe yi- £ 36,500 kulolu hlelo.
Abatshalizimali baqhubeka nokusola ukuthi kwakukhona "abaholi" abaningi e-UK
Ngemuva kokuthi kwenziwe izinkokhelo, uRezaie "wayishaya indiva" imibuzo evela kubatshalizimali ngokuthengisa iziteki zabo, bathi.
Ithokheni le-lyfcoin lalithathwa njengelinenani elingu- $ 1.60, kodwa abatshalizimali bathi kamuva bathola ukuthi alidayisi ngokuhwebelana okuningi futhi empeleni lalinenani elingu- “zero.” Abazange banikezwe isikhwama semali noma amathokheni, kusho bona.
Omunye umtshalizimali wenze umbiko enhlanganweni ebika i-UK i-Action Fraud, uMetro athe wayidlulisela emaphoyiseni aseWest Midlands. Kule ntwasahlobo, usayine inkontileka - ebonwe yiMetro - noRezaie ethembisa ukulihoxisa leli cala futhi waxolisa nasezinkundleni zokuxhumana ekhokhela izinkokhelo zanyanga zonke ezibalelwa ku- £ 5,000 ($ 6,470). Uthi uthole inkokhelo eyodwa kuphela.
Umtshalizimali uthe ukwazile ukubuyisela emuva u- £ 18,500 wama- £ 36,000 awabeke ngemuva kokuxwayisa amalungu eqembu laseLyfcoin WhatsApp ngenkohliso okusolwa ukuthi iyona.
Amaphoyisa aseWest Midlands alihoxisile leli cala, kodwa athi abukho obunye ubufakazi obulethwayo obadlulisela leli cala "phambili futhi esitatimendeni azosibhekisa kuMetro sathi" awekho amacala enziwe. " Abatshalizimali abangu-XNUMX basacindezela iziphathimandla ukuthi ziphenye ngalolu hlelo.